Amandla Okumaketha Kwe-infographic ... Ngesixwayiso | Martech Zone
Lokhu kushicilelwa nomsebenzi omningi esiwenzela amaklayenti kubandakanya okuqukethwe okubukwayo. Kuyasebenza… izithameli zethu ikhule kakhulu ngokugxila kokuqukethwe okubukwayo futhi siphinde sasiza amaklayenti ethu ukuthi akhule ukufinyelela kwawo ngokuqukethwe okubonakalayo okuyingxenye yenhlanganisela.
Lokhu ku infographic ukuthi iMedia Domination Media kudalelwe ukubonisa amandla wokuqukethwe okubukwayo. Akuyona imfihlo ukuthi abathengi baphendula kangcono ekumaketheni okubukwayo, futhi lesi ngesinye sezizathu sokuthi ama-infographics abe yindlela edume kakhulu nephumelelayo yokuthengisa online. Ziyakuvumela ukwethula imininingwane ngendlela izithameli zakho ezizowungenisa ngayo umyalezo wakho, esikhundleni sokumane ushibilikise ngamabhulokhi wombhalo bese ugcina kuphela amaphesenti amancane kakhulu wolwazi.
Isexwayiso sokuqukethwe okubonakalayo
Izingcezu zokuqukethwe okubonakalayo njenge-infographics zibalulekile ku isu lokuqukethwe elisebenzayo kepha kuphela uma zivezwa kungxenyekazi elungiselelwe esiza ukuqhuba ukuzibandakanya okujulile namathuba okuguqulwa. Ngiqonde ukuthini?
Ingabe umbhalo ohambisana nawo wanele ukuthi uzosiza okuqukethwe kwakho okubukwayo kube zibalwa izinjini zokusesha? Uzobona ukuthi sihlala sigoqa ama-infographics ethu ngombhalo onolwazi. Lokho kwenzelwa ukuthi izinjini zokusesha zingaboni ikhasi njengokukhanya kokuqukethwe futhi zinganakwa ezingeni. Ngenkathi i-infographics ivame ukuba namathani wokuqukethwe, i-Google ayikhombisi okuqukethwe ngaphakathi kwe-infographic, babuka okuqukethwe okuzungezile. UMat Cutts waze waxwayisa eminyakeni embalwa edlule ukuthi ukuxhumana nokuthandwa kwe- infographics ingahle yehliswe yizinjini zokusesha (IMO, lokho kungaba yisiphukuphuku futhi ngiyangabaza ukuthi kuyoke kwenzeke).
Ingabe ikhona i shayela esenzweni ku-infographic? Akwanele ukufunda i-infographic bese ubona uphawu lokuthi ngubani owenzile, iliphi isu onalo lokuyisa umfundi esinyathelweni esilandelayo senqubo yokuthenga? Sivame ukukhipha ama-infographics ukukhuthaza okuqukethwe okujulile njengamaphepha amhlophe noma ukuvuselela uhlobo oluthile lokubhaliswa kusayithi lamakhasimende.
Ingabe ikhona i ikhasi lokufika ngokunikezwa ukuthi i-CTA izoshayela ithrafikhi iye kuyo? Ingabe kukhona ifomu lokubhalisela ukubhalisela abafundi i-imeyili noma incwadi yezindaba? Ngabe kukhona okunye okuthunyelwe okuhlobene noma ama-infographics abiwe ekhasini lokufika ukuze ukwazi ukushayela umfundi ngokujulile?
Unjani ukulinganisa umthelela kokuqukethwe okubukwayo okwabiwayo? Asazihluphi nge- kopisha bese unamathisela lo mbhalo ibhokisi elingezansi kwe-infographic elizama ukuphoqelela i-backlink. Nge-CTA yethu ku-infographic, imvamisa sisebenzisa isinqamuleli sesixhumanisi njengeBit.ly esisiza ukukala umsebenzi oqondile owenziwe yi-infographic.
Unjani futhi nini ukugqugquzela i-infographic? Sisabalalisa ama-infographics ethu kumakhasimende ethu ngefomethi ye-landscape PDF elusizo kuSlideshare naku- sithuthukisa i-infographic kuzo zonke iziteshi zenhlalo yamakhasimende, iziteshi zethu zenhlalo, futhi imvamisa izinkampani zobudlelwano bomphakathi neklayenti zifaka i-infographic kumasayithi afanele. Ukudalwa kwe-infographic akwanele, kufanele ube nesu lokukhuthaza. Futhi sizoyikhuthaza kaninginingi… hhayi umkhankaso owodwa nje.
Le infographic ichaza ukuthi kungani okuqukethwe okubukwayo kusebenza ngempumelelo, kuheha, futhi kuyakholisa. Ikhuluma ngempumelelo yecebo le-infographic nokuthi kungani ibhizinisi lakho kufanele licabangele ukumaketha kwe-infographic. Ukumaketha kwe-infographic kuyisu elihle lokuheha, kepha kufanele ube nesu elihambisanayo le- ukugcina nokuguqula ithrafikhi oyidonsayo!
Tags: DK New Mediaukumaketha kwe-infographicukukhushulwa kwe-infographicisu le-infographicihluzo zokwazisaimidiya yokubusa emaketheI-Marketing Infographicsokuqukethwe okubukwayo